Shiinaha 3D Lapel pin warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Si ka duwan geerida wax ku dhinta, 3D pin-lap lap pin pin ayaa si muuqata u calaamadeysan nooc horay loo sii oggol yahay oo ah meel bir ah oo siman), halka 3D pin-ka yar ee jilibka lagu dhejiyo lagu sameeyo iyadoo lagu shubayo biro la shubay cadaadis sare oo horay loo abuuray caaryada naqshadeynta
Cadaadiska sareeya wuxuu keenaa dusha nadiifka ah iyo natiijada saxda ah ee kama dambaysta ah. Qaababkii loo isticmaalay sameynta 3D shubka wuxuu ka qaataa wax ka badan caaryada caadiga ah ee 2D maxaa yeelay habka wax soo saarkoodu wuu ka dhib badan yahay waxaana lagu sameeyaa gebi ahaanba gacmo-gacmeed. oo adkaaday, dahaadhka waa la diyaarin karaa.
Biin kabka ayaa lagu abuuray habka loo shubay, halkaas oo qaabka dareeraha ah ee biraha salkiisa lagu shubo caaryada horay loo sii qaabeeyay, ama "kabka" .Kasting wuxuu abuuraa 3D lapel pin oo laga helo macdano kala duwan, oo ay ku jiraan pewter iyo zinc.
Maxay yihiin faa'iidooyinka shufku?
Daariddu waa geedi socod sax ah oo ku habboon naqshad gaar ah, gaar ahaan markay timaaddo biinanka laabta caadada ka ah.
Marka summad ganacsi la rido halkii shaabad lagu dhufan lahaa, ayaa la soo saari doonaa wax siman oo isku dhafan, oo saddex-cabbir leh.
Daarista waa xulasho aad u fiican sababtoo ah faahfaahinta la bixiyay iyadoo la adeegsanayo caaryado caado u ah naqshadeynta khadadka ganaaxyada, wareegyada ama qaabab kale oo u gaar ah, iyo sawirro macquul ah ,.
Kaliya maahan xulasho aad ufiican oo laxiriirta faahfaahinta naqshadeynta, laakiin biinanka tuurku waxay leeyihiin cufnaan ka yar shaabadooda, way fududdahay, iyaga oo ka dhigaya xulashooyin aad ufiican oo la awoodi karo in aysan kuguuleyn culeys dhaqaale oo badan.
Ka sameysan pewter ama zinc
Markaad rabto inaad u qaabeysid biinankaaga dhabarka masar, ka fikir sidaad naqshaddaada ugu beddelan lahayd shaashadda jilibka ah.Haddii faahfaahintaada iyo khadadkaagu aysan u baahnayn midab dheeri ah si ay u dhammaystiraan, laakiin qaabka ugu dambeeya waa mid cajaa'ib leh, waxaan u maleynayaa in tuuristu ay tahay xulashada saxda ah ee naqshadeyntaada,
Markaad rabto inaad tuubto pin, waxaad isticmaali kartaa zinc allowers ama pewter-ka bilaa rasaasta ah.Zinc waa bir aad u fudud oo si fudud loogu qaabeyn karo qaab kasta ama cabbir kasta oo aad rabto .Pewter waa daawaha culus, waana xulasho muhiim ah goorta waxaad dooneysaa inaad astaysto nashqaddaada.
Xaaladda, Dhimashada-Dhimashada looma heli karo faahfaahinta sameynta, laakiin tuurista wareejinta ayaa sameysa, taas oo noo oggolaaneysa inaan gaarno qaabka loo habeeyay ee aan dooneynay. waa ikhtiyaarka ugu fiican ee naqshadeynta 3d weligiis
Hore: Rhinestone lapel pin
Xiga: Khatarta Lapel Pins
Biinanka 3D Lapel